DOWNLOAD NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA MAKA HP 635 - NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA - 2019
Ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala maka laptọọpụ HP 635
Mgbe ụfọdụ ịkwesịrị ịgbanwe usoro nke faịlụ vidiyo, dịka ọmụmaatụ, maka nzaghachi azụ na ngwaọrụ mkpanaka, egwu egwu ma ọ bụ igbe nhazi. Maka ebumnuche ndị a, ọ bụghị naanị mmemme, mana ọrụ ntanetị pụrụ iche nke nwere ike ime mgbanwe dị otú ahụ. Nke a ga - azọpụta gị site na ịnweta ndokwa ọzọ na kọmputa gị.
Nhọrọ maka ịtụgharị faịlụ vidio na weebụ
E nwere ọtụtụ ụzọ dị iche iche a pụrụ iji gbanwee usoro nke faịlụ vidiyo. Ngwa ngwa weebụ nwere ike ịrụ ọrụ naanị ya, ebe ndị ka dị elu na-enye ike ịgbanwe àgwà nke vidiyo na ụda ahụ a natara, ha nwere ike ịchekwa faịlụ agwụla na mmadụ. netwọk na ọrụ igwe ojii. Ọzọ, a ga-akọwa n'ụzọ zuru ezu usoro ntọghata a na-eji ọtụtụ ngwa weebụ.
Usoro 1: Ụdị
Nke a bụ otu n'ime ọrụ ntọghata nke vidiyo mbụ. Ọ nwere ike ịrụ ọrụ na faịlụ sitere na PC na Google Drive na Dropbox ojii. Tụkwasị na nke a, ọ ga-ekwe omume ibudata ihe ngosi ahụ site na ntinye aka. Ngwa weebụ nwere ike ịmepụta ọtụtụ faịlụ vidio n'otu oge.
Gaa na Mgbasa ozi
Mbụ, ị ga-achọ ịhọrọ vidiyo site na kọmputa, site na ntụle, ma ọ bụ site na nchekwa igwe ojii.
Ọzọ, chọpụta usoro ịchọrọ iji tọghata faịlụ ahụ.
Mgbe pịa nke a "Tọghata".
Mgbe ị gbanwechara ntụgharị nke clip ahụ, chekwaa faịlụ na-apụta na PC site na ịpị "Download"
Usoro 2: Nwegharị-video-online
Ọrụ a dị nnọọ mfe iji. Ọ na-akwado nbudata vidiyo site na diski ike na nchekwa igwe ojii.
Gaa na ọrụ ntanetị-video-online
Jiri bọtịnụ "Mepee Njikwa"iji bulite otu vidiyo na saịtị ahụ.
Họrọ usoro achọrọ nke faịlụ ikpeazụ.
Onye ntụgharị ahụ ga-akwadebe ihe ngosi ahụ ma nye ya ibudata ya na PC ma ọ bụ ígwé ojii.
Usoro 3: FConvert
Ihe ntanetị weebụ a na-enye ike ịgbanwe àgwà nke vidiyo na ụda, na-enye gị ohere ịtọ nọmba achọrọ nke okpokolo agba kwa nkeji ma belata vidiyo n'oge ntụgharị.
Gaa na ọrụ FConvert
Iji gbanwee usoro ahụ, ị ​​ga-eme ihe ndị a:
Iji bọtịnụ ahụ "Họrọ faịlụ" kọwaa ụzọ na faịlụ vidiyo.
Tọọ usoro ntọghata.
Nịm ntọala ọzọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ha.
Ọzọ, pịa bọtịnụ"Tọghata!".
Mgbe nhazi, nyefee faịlụ ndị ahụ site na ịpị aha ya.
A ga-enye gị ọtụtụ nhọrọ maka nbudata. Pịa na njikọ ahụ iji mee nbudata mgbe niile, chekwaa vidiyo gaa na ọrụ igwe ojii ma ọ bụ ịdee QR code.
Usoro 4: Inettools
Ala a enweghị ntọala ọzọ ma nyekwa nhọrọ ngbangharịrị ngwa ngwa. Otú ọ dị, site na mmalite, ị ga-achọ ịchọta ntụziaka ị chọrọ iji tọghata n'etiti ọtụtụ usoro nkwado.
Gaa na Inettools ọrụ
Na ibe na-emepe, họrọ nhọrọ ịgbanwere. Dịka ọmụmaatụ, anyị na-eme ka a tọghata faịlụ AVI na MP4.
Ọzọ, budata vidiyo site na ịpị akara ngosi ahụ na folda oghe.
Mgbe nke a gasịrị, onye ntụgharị ahụ na-agbanwegharị faịlụ gị na-akpaghị aka, mgbe ọ gbusịrị ntụgharị ahụ, ọ ga-enye gị ịkwado nhazi usoro.
Usoro 5: OnlineVideoConverter
Akụ a na-arụ ọrụ na ọtụtụ usoro vidio ma na-enye ike ibudata faịlụ site na ịdebe QR code.
Gaa na ọrụ OnlineVideoConverter
Iji jiri ngwa weebụ, bulite faịlụ gị n'ime ya site na ịpị bọtịnụ ahụ "KWUKWU ma ọ bụ NA-EKWU AHỤ".
Mgbe nbudata ahụ zuru ezu, ị ga-achọ ịhọrọ usoro a ga-eme ka vidiyo ahụ gbanwee.
Ọzọ, pịa bọtịnụ"Malite".
Mgbe nke ahụ gasịrị, chekwaa faịlụ ahụ na igwe ojii Dropbox ma ọ bụ ibudata ya na kọmputa gị site na iji bọtịnụ ahụ "Download".
Ị nwere ike iji ọrụ ịntanetị dị iche iche iji tọghata usoro vidio - họta onye kachasị ngwa ngwa ma ọ bụ jiri ndị na-eme mgbanwe ka ukwuu. Ngwa weebụ ndị akọwapụtara na nchịkọta akụkọ ahụ na-arụ ọrụ ịgbanwere aka na àgwà na-anabata, na ntọala dị mma. Mgbe ị tụlechara nhọrọ niile ị gbanwere, ị nwere ike ịhọrọ ọrụ kwesịrị ekwesị maka mkpa gị.